Samsung ebubo ọzọ megide Apple na mgbasa ozi ya | Gam akporosis
Apple abụwo ebe etiti nkatọ ma ọ bụ ịkwa emo na mgbasa ozi Samsung na ihe karịrị otu oge. Naanị awa ole na ole mgbe o gosipụtara 9 Galaxy Note ya, ụlọ ọrụ Korea laghachiri ibu ahụ. N'okwu a, ha na-eweta ọkwa ọhụụ abụọ, nke na-akatọ Apple ọzọ, yana iPhone X karịsịa.
Mbinye aka ebugo mgbasa ozi ọhụrụ abụọ na ọwa YouTube na United States. Ndị a bụ ọkwa abụọ dị mkpirikpi nke Samsung na-achọ igosipụta ọtụtụ uru ya na 9 Galaxy Note na-enye ma e jiri ya tụnyere Apple's iPhone X.
Mgbasa ozi dị ntakịrị mgbagwoju anya, n'ihi na ha anaghị eweta ihe ọ bụla ọtụtụ ndị ọrụ amabeghị. Anyị maara ike nke ekwentị abụọ ahụ, na nakwa ọnụnọ nke S-Pen na njedebe dị elu nke Samsung. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu isi na ihu ọma ya, ebe ọ bụ na iPhone enweghị nkwado maka pensụl.
Ọ bụ ezie na ọ nweghị ọkwa abụọ dị mkpirikpi na-eme ka o doo anya ihe ekwentị dị ike, ihe Samsung na-etu ọnụ n'otu n'ime ha. Ọ bụ ezie na Galaxy Note 9 nwere ezigbo nhazi (na nsụgharị ya abụọ), mana ọ bụghị na ekwentị Apple adaghị na nke a.
Mana ebumnuche nke ụlọ ọrụ Korea na ọkwa ndị a bụ mee nlebara anya na mmasi maka ogwugwu ohuru gi, na-eji ụfọdụ ọchị na nkatọ nke onye isi ya na ahịa. N’ihi ya, n’echiche a, ha na-ekwe nkwa mejupụta ebum n’uche ha. Ọ bụ ezie na anyị nwere obi abụọ na ha ga-agbakwunye ahịa na ekwentị.
Ihe ngosi 9 Galaxy Note bụ izu a kacha ekwu banyere ekwentị, ọ ga-anọgide na-emepụta ọtụtụ akụkọ na izu ndị na-abịanụ. Karịsịa ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ tụrụ anya ịmalite ya n'ihi ahịa na-adịghị mma nke Galaxy S9. Ya mere, nrụgide kachasị na ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung katọrọ Apple ọzọ na mgbasa ozi ọhụụ ya